တရုတ်လျှပ်စစ်ဂေါက်ရိုက်စကူတာထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းချသူ |ဟိုဘ
လျှပ်စစ်စကူတာ ၁ စီး
မိုင် 100 လျှပ်စစ်စကူတာ...
လျှပ်စစ်စကူတာ 10 နှစ်
လက်ကိုင်ဘားများပေါ်ရှိ အဖွင့်/အပိတ်ခလုတ်မှတစ်ဆင့် ဤမုဒ်ကိုဖွင့်သောအခါ၊ မော်တာသည် သင်နင်းသည့်အခါတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ညင်သာစွာ ထုတ်လွှတ်မည်ဖြစ်သည်။သင်နင်းတံကို လှန်လိုက်သောအခါတွင် မော်တာသည် စက်ဘီးဖြင့် စတင်ကာ သင်အသုံးပြုနေသည့် ဖိအားအပေါ် မူတည်၍ အကူအညီကို ချိန်ညှိပေးသည်။ဤကိုယ်ထည်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်တမ်းတွင် မတူညီသောစကူတာများထက် များစွာပိုမိုလေးလံသောတည်ဆောက်မှုအား ကစားနိုင်သော်လည်း အပိုပါဝါအတွက် ၎င်းကို သင်ပိုနှစ်သက်ပေမည်။သင်၏စကူတာရှိ အပိုဘရိတ်များသည် ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အနည်းငယ်ပိုသောအလေးချိန်နှင့် အပိုအစိတ်အပိုင်းများပါရှိစေရန်အတွက် ကောင်းမွန်သောနောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။သို့သော် လျှပ်စစ်မဟုတ်သော နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပါဝါကြောင့် လျှပ်စစ်စက်ဘီးများပေါ်တွင် ဘရိတ်အသုံးပြုရန် မည်မျှခက်ခဲသည်ကို တိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးမှု မရှိပါ။
အနည်းဆုံး မှာယူမှု အရေအတွက်- :1 Pieces/Pieces
Supply နိုင်ခြင်း: :တစ်လလျှင် 3000 Pieces/Pieces
၁ထည်စျေးနှုန်းတစ်ထည်ကို 3155usd ပါ။
၁၀ထည်စျေးနှုန်းတစ်ထည်ကို 3055usd ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်ပို့ပါ။ ထုတ်ကုန်ဗီဒီယို
အချိန်တစ်ဝက်အတွင်း လျှပ်စစ်စကူတာဥရောပတွင် သင်၏ရလဒ်များကို သုံးဆတိုးလိုက်ပါ။
လက်ကိုင်ဘားများပေါ်ရှိ အဖွင့်/အပိတ်ခလုတ်မှတစ်ဆင့် ဤမုဒ်ကိုဖွင့်သောအခါ၊ မော်တာသည် သင်နင်းသည့်အခါတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ညင်သာစွာ ထုတ်လွှတ်မည်ဖြစ်သည်။သင်နင်းတံကို လှန်လိုက်သောအခါတွင် မော်တာသည် စက်ဘီးဖြင့် စတင်ကာ သင်အသုံးပြုနေသည့် ဖိအားအပေါ် မူတည်၍ အကူအညီကို ချိန်ညှိပေးသည်။ဤကိုယ်ထည်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်တမ်းတွင် မတူညီသောစကူတာများထက် များစွာပိုမိုလေးလံသောတည်ဆောက်မှုအား ကစားနိုင်သော်လည်း အပိုပါဝါအတွက် ၎င်းကို သင်ပိုနှစ်သက်ပေမည်။သင်၏စကူတာရှိ အပိုဘရိတ်များသည် ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အနည်းငယ်ပိုသောအလေးချိန်နှင့် အပိုအစိတ်အပိုင်းများပါရှိစေရန်အတွက် ကောင်းမွန်သောနောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။သို့သော် လျှပ်စစ်မဟုတ်သော နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပါဝါကြောင့် လျှပ်စစ်စက်ဘီးများပေါ်တွင် ဘရိတ်အသုံးပြုရန် မည်မျှခက်ခဲသည်ကို တိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးမှု မရှိပါ။ခေတ်ပြိုင်အချက်အချာကျသော မော်တာများနှင့် အလယ်အလတ်ဒရိုက်စနစ်များဖြင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ရှေးရိုးဆန်သောပုံပေါက်သော်လည်း တန်ဖိုးနည်းသောဒီဇိုင်းသည် သမားရိုးကျစက်ဘီးကို အနည်းငယ်အားစိုက်ထုတ်လိုသော စက်ဘီးသမားများအတွက် ထိုက်တန်ပါသည်။မော်တာများတွင် freewheel လည်းပါဝင်သည်- မျိုးဆက်သစ်ဘရိတ်အုပ်ရန် အလားအလာမရှိဟုဆိုလိုသော်လည်း ၎င်းတို့သည် စွမ်းအင်အောက်မလျော့ဘဲ အနည်းငယ်သောဆွဲအားဖန်တီးခြင်း၏ အစားထိုးအဖြစ် ဂီယာအချက်အချာကျသော မော်တာတပ်ဆင်ထားသော e-bikes များကို သမားရိုးကျကဲ့သို့ ပိုမိုစီးနင်းနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ စက်ဘီး။EVELO လျှပ်စစ်စက်ဘီးများသည် ပြည်ထောင်စုလိုအပ်ချက်တစ်ခုစီနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ဖက်ဒရယ်ဥပဒေများနှင့်အညီ၊ လျှပ်စစ်တစ်ခုတည်းသာမုဒ်တွင် ထိပ်တန်းအဆင့်သည် တစ်နာရီလျှင် မိုင် 20 သာ ကန့်သတ်ထားကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ပြောင်းပြန်လှန်ခြင်း၊ အရှိန်ခလုတ်သုံးခု။Pedal-assist မုဒ်တွင် အကူအညီ အပိုင်းသုံးမျိုး ပေးသည်- အနိမ့် (30%)၊ အလတ် (60%) နှင့် အမြင့် (100%)။ရာခိုင်နှုန်းသည် သင်၏နင်းအားဖြည့်ရန်အတွက် မော်တာမှ နောက်ထပ်ပါဝါမည်မျှပေးမည်ကို ရိုးရှင်းစွာဖော်ပြသည်။E-bikes များသည် စီးနင်းသူဝင်ရောက်မှုအပေါ်အခြေခံ၍ pedal-help range ကိုဆုံးဖြတ်ရန် အာရုံခံကိရိယာများကိုအသုံးပြုသည်။မော်တာတွင် ပုံမှန်သုံးမျိုးနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပါဝါအဆင့်ငါးဆင့်ပါရှိပြီး လမ်းဖြတ်လမ်းဆုံများနှင့် လမ်းဆုံများတွင် မကြာမီသင့်အား ဝေးကွာစေမည့် အရှိန်မြှင့်ခလုတ်တစ်ခုအပြင် အရှိန်ထိန်းခလုတ်တစ်ခုပါရှိသည်။ဤကလေးစကူတာအများစုသည် ရပ်ကွက်နှင့် ကိုက်ညီသောလမ်းဖြစ်နိုင်ပြီး သီးခြားလိုင်စင် သို့မဟုတ် ရောစပ်မှုတိုင်း မလိုအပ်ပါ။ဤမုဒ်တွင်၊ ရောနှောထားသော လူသားများနှင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်များ၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို သင် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။E-scooters များတွင် ဤအချက်အလက်ကို သင့်ဖုန်းနှင့် အခြားစက်ပစ္စည်းများတွင် ကြည့်ရှုနိုင်စေမည့် Bluetooth-သင့်လျော်သောအက်ပ်များပါရှိသည်။Jiangsu Triuni Import & Export Co., Ltd. မှ 2021 EEC & Coc E-Scooter EEC & Coc Flash 5000W-12000W Max 150kmh Long Range လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။ Zhejiang Altruism Technology Co., Ltd. မှ စိတ်ကြိုက်အရောင်အချပ်ပြားနှင့် ဒရမ်ဘရိတ်လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်။ လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်သည် တန်ဖိုးကြီးကြီးမားမားတန်ဖိုးရှိသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အခမဲ့နမူနာနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခကို ပုံစံတန်ဖိုးတွင်ပါ၀င်မည်မဟုတ်ပါ။Fluid free ခရီးမှ အလွန်လျင်မြန်သော တုံ့ပြန်မှု။A6။ကျွန်ုပ်တို့၏ အရောင်းမန်နေဂျာများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ Technician Team သည် အချိန်ကိုက်ပြီးပြည့်စုံသော စုစုပေါင်းရောင်းချမှုနှင့် အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှုကို တင်ပြပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေးပြဿနာများကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အခမဲ့ အစားထိုးလဲလှယ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး စျေးနှုန်းများကို ပေးဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုပါသည်။
Q. ကုန်ပစ္စည်း၏စံနှုန်းကို မည်သို့စီမံခန့်ခွဲနိုင်မည်နည်း။ရမှတ်များသည် မထင်သလိုဖြစ်ခြင်းကြောင့် မော်တာရမှတ်ထက် ပိုများသောညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်သည် watts ရရှိရန် ဗို့အား amps ဖြင့် မြှောက်နိုင်သည်။Electric Spokes သည် ၎င်း၏ဖောက်သည်များအား စတိုးဆိုင်သို့လာရောက်လည်ပတ်သည့်အခါတိုင်းတွင် အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ကိုရရှိကြောင်း အာမခံသည်၊ ထို့ကြောင့် ကော်ပိုရိတ်သည် Jersey Bents LLC နှင့် ပူးပေါင်းပြီး Brooks စက်ဘီးပစ္စည်းများကိုလည်း ပေးပါသည်။၎င်း၏ ခေတ်မီသော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဘုန်းကြီးသော ပံ့ပိုးကူညီမှု ဝန်ဆောင်မှုများသည် နယူးဂျာစီတွင် နာမည်ရလာခဲ့သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ထုတ်ကုန်တစ်ခုခုကို သင်စိတ်ဝင်စားပါက ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ရန် မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် သင်၏အမိန့်စာ၏နယ်ပယ်အားလုံး (စံ သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်) အကြောင်း ကြိုမဖော်ပြထားသေးသူများအတွက် သင့်ထံ ဆက်သွယ်ပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် UK တွင် ဂိုဒေါင်ရှိသည်။ အများအားဖြင့် အလုပ်ချိန် 1 ရက်အတွင်း ပို့ဆောင်လေ့ရှိပါသည်။ ထုတ်ကုန်ပက်ကေ့ချ်တွင် ညွှန်ကြားချက်စာအုပ်ပါရှိပြီး သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ပေါ့ပါးမှု - အလွန်အကျွံ စွမ်းရည်ရှိသော 36V10Ah Lithium-Polymer ဘက်ထရီများသည် အလေးချိန်6ပေါင်အထိ ရှိနိုင်ပါသည်။လီသီယမ်ဘက်ထရီများသည် အလွန်ပေါ့ပါးသည်။လျှပ်စစ်စကူတာဘက်ထရီများနှင့် လျှပ်စစ်စက်ဘီးဘက်ထရီများသည် မှန်ကန်စွာ ဂရုစိုက်ထိန်းသိမ်းပါက ၂ နှစ်-သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ကြာရှည်ခံနိုင်သည်။"လျှပ်စစ်တစ်ခုတည်းသာ" မုဒ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိပ်တန်းအလျင်ကို တစ်နာရီလျှင် မိုင် 20 နှုန်းဖြင့် ကန့်သတ်ထားသော်လည်း သင်အလိုရှိပါက စက်ဘီးနင်းသည့်စွမ်းအင်ဖြင့် သင့်စက်ဘီးကို အမြန်သွားနိုင်သည်။စက်ဘီးနင်းခြင်းကို စတင်ရန် အသင့်ဖြစ်လျှင် သို့မဟုတ် ရပ်တန့်လိုပါက တွန်းအားကို ဆက်၍တွဲထားရန် သို့မဟုတ် လွှတ်လိုက်ပါ။လွတ်လပ်စွာ စက်ဘီးစီးခြင်းမှ သင် ပျော်ရွှင်မှု ရပါသလား၊ သို့သော် ယေဘုယျအားဖြင့် သင်၏ ပန်နီယာများကို ပေါ့ပါးပုံရပြီး လေဝင်လေထွက် တောင့်တင်းမှု နည်းပါးပြီး တောင်ကုန်းများသည် မတ်စောက်လွန်းခြင်း မရှိစေချင်ပါ။ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊ အလယ်အလတ်တန်းစားမောင်းနှင်သူများသည် မတ်စောက်သောတောင်ကုန်းများကိုတက်ခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ် တွန်းအားပေးထားသော e-bikes များထက် ပိုမိုထိရောက်စွာတက်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် စက်ဘီး၏ရှိရင်းစွဲဂီယာဒရိုက်ရထားကိုအသုံးပြု၍ အရှိန်နိမ့်တက်ခြင်းအတွက် အထက်ဂီယာလျှော့စျေးကို အကျိုးကျေးဇူးရရှိစေရန်၊ ဂီယာမဟုတ်သော စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှု။၎င်းသည် မော်တာ၊ ဘက်ထရီ သို့မဟုတ် မော်တာထိန်းချုပ်ကိရိယာဖြင့် မှားယွင်းသွားနိုင်သည့် ပြဿနာများစွာထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် သင်မဝယ်မီတွင် သင်ဘာကို ခြေလှမ်းလှမ်းနေပြီလဲဆိုတာ သိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။၎င်းတို့၏ ဝက်ဝံများမှလွဲ၍ Direct-drive hub မော်တာများတွင် လွှဲပြောင်းခြင်း အစိတ်အပိုင်းများ မပါရှိပါ- မော်တာသည် ဖရိန်၏ထွက်ပေါက်ဆီသို့ လုံခြုံစွာ လုံခြုံစွာ ဖြတ်သွားသော axle ကိုဖြတ်၍ လည်ပတ်နေပါသည်။ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ဈေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သော ဖက်ရှင်များစွာထဲမှ ပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုကို ကူညီပေးထားပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏အိပ်မက်- "Smart EBIKE" ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အယူအဆကို နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မှာပါ။ထို့ကြောင့် သင်သည် No Vat 50km/h Max Speed ​​Electric Scooter Folding Smart E Scooter 1000w Electric Scooter အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် Wheel Monopattino Elettrico ပစ္စည်းအတွက် US $767.69 ပေးချေရပါမည်။
မီးလုံးများနှင့် အကာအရံများကို ထည့်သွင်းထားပြီး သင့်စမတ်ဖုန်းအား ဖျော်ပေးရန်အတွက် အားသွင်းပေါက်တစ်ခုလည်း ရှိသည် (Cowboy အက်ပ်မှတစ်ဆင့် စမတ်ကျသောလမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှုများဖြင့် ရိုးရှင်းစွာ လမ်းညွှန်ပေးနိုင်သည်)။ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (BMS) သည် ဘက်ထရီအထုပ်ကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီး အားသွင်းခြင်းနှင့် အားပြန်သွင်းခြင်းကို ထိန်းချုပ်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။အားသွင်းဖို့3နာရီကနေ4နာရီအထိ။ဤလျှပ်စစ်စကူတာသည် သင့်အား အပြည့်အဝရပ်တန့်သွားစေရန် လွယ်ကူစေမည့် ဘရိတ်စနစ်ပါ၀င်ပါသည်။၎င်းတွင် ဆိုင်းထိန်းအစုအဝေးနှင့် မြေပြင်ရှင်းလင်းခြင်းတို့ကို သင်တွေ့ကြုံရတိုင်း လွယ်ကူသက်သာစွာ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။၎င်း၏သေးငယ်သောအတိုင်းအတာရှိသော်လည်း၊ ၎င်းသည် ၎င်း၏ကြံ့ခိုင်တည်ဆောက်မှုနှင့် သင့်လမ်းကြောင်းရှိ အသေးစားအဖုအထစ်များကိုစုပ်ယူနိုင်သော နောက်ရှော့တိုက်စုပ်ကိရိယာကြောင့် ချောမွေ့ပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသော ခရီးကိုပေးသည်။၎င်း၏ 1,000-Watt မော်တာကြောင့် Apollo Explore သည် တစ်နာရီလျှင် 31 မိုင်အထိ အရှိန်တင်နိုင်ပြီး ဒေသခံဧည့်သည်များကို လိုက်မီရန် လုံလောက်သည်ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။e-bike ကြောင့် သင့်နောက်လိုက်ကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ။နှိုင်းယှဉ်မှုအရ၊ Blix Bikes Vika Travel ခေါက်အီးစက်ဘီးတွင် မော်တာအား 250 (တည်ငြိမ်) ဝပ်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော်လည်း ဘက်ထရီအား 36 ဗို့ဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီး မော်တာထိန်းချုပ်ကိရိယာတွင် 18 amps ရှိသည်။စွမ်းအားအပြည့်ဖြင့် မော်တာဖြင့် တောင်ဖြတ်ကျော်ကို တက်ရန် မကြိုးစားပါ” ဟု Lemire-Elmore က ဆိုသည်။အဆိုပါ စုတ်တံများသည် မော်တာများကို ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေမှု နည်းပါးစေပြီး အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဟောင်းနွမ်းသွားတတ်သောကြောင့် စုတ်တံမရှိသော မော်တာများသည် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကတည်းက စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။အရှိန်အလွန်အကျွံဝင်သော ဆိုက်ကို ရှောင်ပါ။ယာဉ်စည်းကမ်းဥပဒေလမ်းညွှန်ချက်အားလုံးကို လိုက်နာရန်၊ မှန်ကန်သော လုံခြုံရေးကိရိယာများ ဝတ်ဆင်ရန်နှင့် ယာဉ်မောင်းများ၊ စက်ဘီးစီးသူများ၊ လမ်းသွားလမ်းလာများနှင့် မတူညီသော စကူတာစီးနင်းသူများထံ သင့်ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်းစွာ အချက်ပြရန် လမ်းပေါ်တွင် စီးနင်းသည့်အခါတွင်လည်း အရေးကြီးပါသည်။
အားအပြည့်သွင်းထားသည့်အခါ အမြင့်ဆုံးအကွာအဝေး 28 မိုင်အထိ ခရီးပေါက်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည် အလွန်သင့်လျော်သောအကွာအဝေးဖြစ်သည်။အကူအညီမရှိမှ အကူအညီများစွာအထိ သင်အလိုရှိသော အကူအညီပမာဏကို ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။အကောင်းဆုံး- သယ်ယူရလွယ်ကူသော စွမ်းအင်မြင့်လျှပ်စစ်စကူတာပေါ်တွင် စီးရန်တတ်နိုင်သော ဝယ်သူများ။ထို့အပြင်၊ ဤ Glion Dolly 250W Folding Electric Scooter ဖြင့် ဧည့်သည်များ၏ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသည့်နည်းလမ်းဖြင့် သင့်လမ်းလျှောက်နိုင်ပါသည်။ဖြန့်ထားသော အတိုင်းအတာမှာ H 93cm x W 51.5cm x L x 100cm ဖြစ်သည်။ခေါက်သောအခါတွင် နောက်အတိုင်းအတာများ- H 70cm x W 51.5cm x L 46cm.5cm x L x 100cm နှင့် ခေါက်သောအခါ အောက်ပါအတိုင်းအတာများ- H 70cm x W 51.5cm x L 46cm။အကယ်၍ သင်သည် ဤမော်ဒယ်လ် သို့မဟုတ် ခေါက်ရွေ့လျားနိုင်သော စကူတာများအကြောင်း အပိုသင်ကြားပေးရန် စိတ်ဝင်စားပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆောင်းပါးအပြည့်အစုံကို ကြည့်ရှုပါ။ဤ 11inch Off Road Electric Scooter Adults 60V 5600W Dual Motor Folding E Scooter 85KM/H Max Speed ​​Electric Scooter Europe Stock ထုတ်ကုန်အကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် အထက်တွင်ရှိသော Shop Now ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ဘောလ်-ပေါ် မော်တာသည် အများအားဖြင့် တာယာကို ဆက်သွယ်ပေးသည့် ဘီးငယ်တစ်ခုကို မောင်းနှင်သည်၊ အချို့သော အစုံသည် လမ်းဆုံ၏ ဘရိတ်အတက်တွင် ချိတ်ထားသော်လည်း၊မော်တာဘီးက တာယာကို လည်ပတ်စေပြီး ရှေ့ကို မောင်းနှင်ပါတယ်။တစ်နေ့တာလုံး ဂီယာတစ်ခုတည်းနဲ့ ကားတစ်စီးကို မောင်းနှင်ဖို့ စိတ်ကူးကြည့်ပါ။"ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောထုတ်ကုန်များဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အလားအလာများသည် ဖောင်ပုံစံခရီးတစ်ခုအဖြစ် သေချာပေါက်တွေ့ကြုံခံစားရကြောင်း သေချာစေပါသည်။Blix Bikes ၏ Malmberg မှ အာရုံခံကိရိယာများသည် ဈေးမကြီးသော၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု နည်းပါးပြီး စက်ဘီးစီးသူအများအပြား အသိအမှတ်ပြုသည့် စိတ်အေးလက်အေး စီးနင်းကျွမ်းကျင်မှုကို ပေးဆောင်သည်ဟု ဆိုသည်။သင် e-bike ထက်စောစီးစွာစီးနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း၊ ဂီယာများ၊ ခလုတ်များနှင့် ကွဲပြားသောထိန်းချုပ်မှုများမရှိခြင်းကြောင့် သင်ချက်ချင်းမစိုက်ထုတ်ဘဲ စီးနင်းရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် အရှိန်အဟုန်မြင့်စွာတက်ခြင်း၊ အလွန်အကျွံတက်ခြင်းသည် မော်တာတစ်လုံးကို အပူပြန်မဖြစ်စေဘဲ ကြော်ပေးကာ စက်ဘီးမှမရှိခြင်းမှာ ထုတ်လုပ်သူများ အလွယ်တကူထုတ်ဖော်မည့်အရာမဟုတ်ပေ (သို့သော် အပူပြန်မတက်ဘဲ e-bike အသစ်များသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် မော်တာများပါရှိသည်။ ထုတ်လုပ်သူများ သတ်မှတ်ချက်များထက် အပိုစွမ်းအင်ကို ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။)pedaling cadence သို့မဟုတ် torque sensors များသည် မြင်းစီးသူ၏ pedals အတွင်းသို့ မည်မျှ torque မည်မျှရှိသည်ကို ခံစားရစေမည့် torque sensors များ။အချို့သောလျှပ်စစ်စက်ဘီးများသည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် မောင်းနှင်ခြင်းထက် သာလွန်၍ နင်းချေခြင်းမရှိဘဲ စီးနင်းနိုင်စေပါသည်။အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တုံ့ပြန်ရန် မလိုအပ်ပါ - လွယ်ကူသော နင်းစက်သည် လှည့်ကွက်ကို လုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။၎င်းတို့၏ ရိုးရှင်းသော ဒီဇိုင်းများကြောင့် ပြဿနာများသည် circuit သို့မဟုတ် ဘက်ထရီ သို့မဟုတ် Scooter လည်ပတ်သည့် ယန္တရားတွင် ဖြစ်နိုင်သည်။အကယ်၍ သင်သည် နည်းပညာပိုင်းအရ သဘောထားကြီးပြီး သင်၏လက်များကို ညစ်ပတ်စေရန် စိတ်မ၀င်စားပါက hub motor သို့မဟုတ် mid-drive စနစ်ဖြင့် စက်ဘီးတိုင်းနီးပါးကို ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်။လျှပ်စစ်စက်ဘီးများအတွက် အသုံးအများဆုံး မော်တာအမျိုးအစားကို hub motor ဟုခေါ်သည်။အရေးကြီးသည်မှာ၊ Blix သည် စက်ဘီး၏ 250 ဝပ်အား တည်ငြိမ်ကြောင်း မှတ်သားထားပြီး Juiced Bikes မှ ၎င်း၏ 750 ဝပ်အား မည်မျှကြာအောင် ထိန်းထားနိုင်သည်ကို မဖော်ပြထားကြောင်း မှတ်သားထားသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်ထရီဗို့အားဇယားရှိ ဘက်ထရီအမျိုးအစားတိုင်းအတွက် ကျန်ရှိသည့် % သည် ဘက်ထရီဗို့အားနှင့် မည်ကဲ့သို့ ဆက်စပ်နေသည် (စကူတာအချို့က ၎င်းကိုချက်ချင်းပြသသည်) ကို သင်တွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ပစ္စည်းနံပါတ် K15 72V ဘက်ထရီဗို့အား 72V 100AH
ဘီးများ Exposion Proof ဖုန်စုပ်တာယာ မက်မောပါသည်။ 280KG
စုပ်ယူမှု Spring/Double Fork ဆိုင်းထိန်းစနစ် မော်တာပါဝါ 15000w
မီးခွက် LED မီး ရေစိမ်ခံသော ip54
ထိုင်ခုံ Spring Shock စုပ်ယူမှု ဘက်ထရီ LG ဘက်ထရီ
နောက်ဘီး မော်တာ။ 15,000w ပြောင်းလဲနိုင်သော မြန်နှုန်း3အပြောင်းအလဲ
နမူနာ 1pc လက်ခံပါသည်။ အရည်အသွေးအာမခံချက် 1 နှစ်
လာရောက်လည်ပတ်မှုအတွက် အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို စိတ်ဝင်စားပါက ကျေးဇူးပြု၍ တုံ့ဆိုင်းမနေဘဲ အချိန်မရွေးဆက်သွယ်ပါ။e, ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါသည်!
ယခင်- လျှပ်စစ်စကူတာ gta
နောက်တစ်ခု: လျှပ်စစ်စကူတာ 10 နှစ်
mong pu ဖြေရှင်းချက်များကို5နှစ်အထိ ပံ့ပိုးပေးရန် အာရုံစိုက်ပါ။
E Trans Electric Scooter
လူကြီးများအတွက် လျှပ်စစ်စကူတာ လျှပ်စစ်စကူတာ...
လူကြီးများအတွက် ထိပ်တန်းလျှပ်စစ် စကူတာ...
လျှပ်စစ်စကူတာစက်ဘီးလူကြီးများ Pro လျှပ်စစ်စကူတာ
လေးလံသော လူကြီးများအတွက် ခေါက်နိုင်သော လျှပ်စစ်စကူတာ...